Monument Valley 2 dia nohavaozina mba hanampiana atiny vaovao | Vaovao IPhone
Nohavaozina ny Monument Valley 2 mba hanampiana atiny vaovao
Ignatius Room | | Lalao IPhone
Hatramin'ny nananganana ny Monument Valley tao amin'ny App Store tamin'ny 2014, dia lasa a mariky ny lalao ankamantatra. Tamin'ny taona 2017, ustwo, mpamorona ity lalao ity, dia namoaka ny Monument Valley 2, lalao manitatra ny atin'ny kinova voalohany ary tsy nahazo atiny vaovao nanomboka tamin'izay.
Ary lazaiko fa tsy nahazo atiny vaovao aho, satria vao nohavaozina ilay fangatahana ampio seho efatra vaovao Tian'izy ireo hampahafantatra izany mba hahafahanay manao sonia ny hetsika Playing for the Planet ho fiarovana ny ala.
Ny toko vaovao nosoratanay ho an'ny Monument Valley 2 dia Mivoaka IZAO! Ny Lost Forest dia toko manokana noforoninay hanampiana amin'ny fiarovana ny hazo, ho fandraisanay anjara amin'ny Playing For The Planet Green Game Jam!# monumentvalley2 #PlayingForThePlanet #GreenGameJam pic.twitter.com/CjqYvrZqUT
- lalao ustwo (@ustwogames) Oktobra 14, 2021
Amin'ny famaritana ity fanavaozana vaovao ity dia afaka mamaky isika:
The Lost Forest dia toko iray izay noforoninay mba hiarovana ny hazo, ao anatin'ny hetsika Green Game Jam of the Playing for the Planet.
Amin'ireto seho akaiky efatra ireto dia manantena izahay hanome aingam-panahy anao hanasonia ny fanangonan-tsonia Play4Forests ary hanambara ny fahaliananay iraisana amin'ny fiarovana ny ala.
Ny tanjon'ity fandraisana andraikitra ity, araka ny voalaza tao amin'ny tranonkalany dia:
Ny ala ataonay, iray amin'ireo mpiara-miombon'antoka akaiky indrindra amin'ny ady amin'ny hamehana amin'ny toetrandro, dia iharan'ny fandrahonana mihombo. Ny feonao dia afaka manampy amin'ny fiantohana ny ho avy tsaratsara kokoa ho an'ny ala sy ny olombelona. Amin'ny maha ONU antsika, iraka ataontsika ny hamolavola fanovana ho amin'ny ho avy maharitra, saingy amin'ny alàlan'ny fanampianao ihany no ahafahanay manao ny fiarahamonina iraisam-pirenena tena hiasa.
Ao amin'ny Monument Valley 2 ny iraka ataontsika dia ny hitarika renim-pianakaviana iray sy ny zanany vavy dia mamakivaky ny maritrano majika izay hahitan'izy ireo làlana tsy azo tanterahina sy piozila mahatalanjona rehefa mamoaka ny tsiambaratelon'ny Geometry Masina.
Tsangambato Valley 2 Azo alaina ao amin'ny App Store amin'ny vidiny 1,99 euro. Raha mpampiasa Apple Arcade ianao dia afaka mankafy ity lalao ity amin'ny vidin'ny famandrihana amin'ny alàlan'ny Monument Valley + ankoatry ny lohateny 200 hafa.
Tsangambato Valley 2€ 4,99
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Nohavaozina ny Monument Valley 2 mba hanampiana atiny vaovao
Apple dia manakarama lohan'ny lozisialy vaovao hampandeha HomePod vaovao
Ity no base diagnostika tsy misy tariby an'ny Apple Watch Series 7